Ireo teny sy fepetra ireo ("Terms", "Agreement") dia fifanarahana eo amin'ny Operator Website ("Operator Website", "us", "we" na "our") ary ianao ("User", "ianao" na "your "). Ity fifanarahana ity dia mamaritra ny fepetra sy ny fepetra amin'ny fampiasana ny tranokala avalanches.com sy ny vokatra na serivisiny («Website» na "serivisy").
Kaonty sy mpikambana
Tokony ho 13 taona ianao raha kely indrindra dia afaka mampiasa ity tranokala ity. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ity tranokala ity ary amin'ny fanekena ity fifanarahana ity ianao dia manome alalana ary misolo tena anao fa 13 taona farafahakeliny. Raha mamorona kaonty ao amin'ny tranokala ianao, tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny fiarovana ny kaontinao ianao ary tompon'andraikitra tanteraka amin'ny hetsika rehetra mitranga eo ambanin'ny kaonty sy izay fihetsika hafa natao. Ny fahazoana mombamomba ny fifandraisana tsy marina momba ny karazany rehetra dia mety hiafara amin'ny fampiatoana ny kaontinao. Tokony hampandre anay avy hatrany ny fampiasana ny kaontinao tsy misy alalana na amin'ny fandikan-dalàna hafa. Tsy ho tompon'andraikitra amin'ny asa na famafazanay aminao izahay, ao anatin'izany ny fahavoazan'ny karazan-javatra rehetra nateraky ny fihetsiketsehana na famafazana toy izany. Azontsika atao ny mampiato, manala na manilika ny kaontinao (na ny ampahany aminy) raha toa ka fantatsika fa nandika izay omena ity fifanarahana ity ianao na ny fitondran-tenanao na ny atiny dia manimba ny lazantsika sy ny tsara sitrapo. Raha esorinay ny kaontinao noho ireo antony voalaza teo aloha, dia mety tsy hisoratra indray ny serivisy eto aminay. Azonay sakanana ny adiresy mailaka sy ny adiresy protocol amin'ny Internet mba hisorohana ny fisoratana anarana bebe kokoa.
Tsy manana angon-drakitra, fampahalalana na fitaovana fotsiny izahay ("Atiny") izay alefanao amin'ny tranokala amin'ny fampiasana ny serivisy. Ianao dia hanana andraikitra tokana amin'ny fahamarinana, ny kalitao, ny fahatokisana, ny maha-azo itokisana, ny fahatokisana, ny fahamendrehana, ary ny fananana fananana ara-tsaina na ny zon'ny fampiasana ny votoatiny natolotra. Azontsika atao, saingy tsy manana adidy ny, hanara-maso ny votoaty ao amin'ny tranokala natolotra na noforonina tamin'ny alàlan'ny serivisinay. Raha tsy avelanao manokana, ny fampiasanao ny tranokala dia tsy manome alalana anao hampiasa, hanarina, hanitsy, hanova, hanonta na hanaparitaka ny votoaty noforoninao na hotehirizina ao amin'ny kaontinao mpampiasa ny varotra sy ny marketing na ny tanjona mitovy amin'izany. Saingy omenay alalana hiditra ianao, mandika, mizara, mitahiry, mamindra, manavao, mamerina ary manatanteraka ny votoatin'ny kaonty mpampiasa anao raha tsy maintsy takiana amin'ny fanomezana ny tolotra ho anao. Raha tsy mametra ny iray amin'ireo solontena ireo isika na manana antoka, dia manana ny zontsika isika, na dia tsy adidy aza izany, amin'ny maha-fikatsahana antsika manokana, dia mandà na manaisotra izay votoatiny izay, raha ny hevitry ny saintsika dia manitsakitsaka ny politika rehetra na manimba. na manohitra.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny fijanonana ao amin'ny tranokala izahay. Na ahoana na ahoana, tsy tokony ho tompon'andraikitra izahay amin'ny fatiantoka misy atiny. Adidinao manokana ny mitazona serivisy mifanaraka amin'ny atiny. Na eo aza ny voalaza etsy aloha, amin'ny toe-javatra sasany ary amin'ny toe-javatra sasany, miaraka amin'ny tsy misy fepetra dia azontsika atao ny mamerina ny sasany na ny data rehetra nofongorana ho daty sy fotoana voafetra izay nanohana data momba ny tenantsika manokana. tanjona. Izahay dia tsy manome toky fa misy ny data ilaina.
Fanovana sy fanitsiana
Izahay dia manana ny zo hanova an'io fifanarahana io na ny politikany mifandraika amin'ny tranokala na serivisy amin'ny fotoana rehetra, izay mahomby amin'ny famoahana ny fanavaozana ity fifanarahana eo amin'ny tranokala ity. Rehefa manao izany dia handefa fampandrenesana ao amin'ny pejy voalohany amin'ny tranokalanay. Ny fampiasana mitohy amin'ny tranokala aorian'ny fiovana toy izany dia ny fanekenao amin'ny fanovana toy izany.
Fanekena ireo teny ireo
Ekenao fa efa namaky ity fifanarahana ity ianao ary mifanaraka amin'ny fepetra sy ny fepetra rehetra ao. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokala na ny serivisinao no ekena fa hofehezin'ity Fifanarahana ity. Raha tsy ekena ny hanaraka ny fepetra tamin'ity fifanarahana ity dia tsy nahazo alalana hampiasa na hiditra ny tranokala sy ny serivisy ianao.
Raha manana fanontaniana momba ity Fifanarahana ity ianao, azafady mba hifandraisa aminay.
Ity farany dia navoaka farany tamin'ny 12 aprily 2019